Zvikara zvina Zeziso | Martech Zone
Zvikara zvina zveMaziso
Svondo, June 10, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Iyi inoshamisa firimu rakazvimirira uye pamwe ramangwana rekuparadzirwa kwemufirimu. Yakanyanya kutarirwa kune vanhu vakaita semwanakomana wangu, asi ini ndaizvifarira. Nyaya yacho inonyatsoratidza kusanzwisisika kwese kwekupinda muhukama. Zvinotyisa pane dzimwe nguva, asi ndinofungidzira kuti ichokwadi (uye ini ndave kuchembera). Iwo mameseji ari seri kweiyo bhaisikopo akakodzera uye anoshanda kune chero wechidiki, vachizviwana ivo pachavo uye kune mumwe nemumwe muhupenyu hwavo hwehudiki.
Vatungamiriri vava kutsigirwa neSpout - munhu wega wega anosaina, Spout achapa $ 1 yekubatsira kubhadhara iyo firimu. Zvakare, iyo Website ine chitoro kwaunokwanisa kurodha muvhi, odha iyo dvd, tora hembe, nezvimwe.
Turera yeMane Eyed Monsters
Iyo bhaisikopo rese rinowanikwa kwe1 vhiki pa Youtube. Iyo firimu inotonhorera - tarisa kunze. Ndingafarire kuona bhaisikopo rakadai rinopa mari inokwana kuti vatungamiriri vaenderere mberi nebasa ravo. Iyo haisi iyo inonakidza nzira yekushambadzira uye kugovera mafirimu? Ini handitende kuti uchawana bhaisikopo nekuvimbika uye kwechokwadi kweVane Eyed Monsters mune chero mainstream yekugadzira kambani.
Tags: zvikara zvina zvine mazisoYouTube
Uchishandisa Mishandirapamwe yekutarisa Chikamu Chinozivikanwa muWordPress uye Google Analytics
Ini ndinoda vanhu muzviziviso…